Manamarina ny laharan'ny tranokalanao amin'ny fikarohana manokana. Martech Zone
Alarobia, Desambra 16, 2009 Zoma, Febroary 10, 2017 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo mpanjifako dia niantso tamin'ny herinandro lasa teo ary nanontany ny antony, rehefa nitady izy dia teo amin'ny laharana voalohany ny tranonkalany fa nisy olon-kafa nampidina azy ilay pejy. Raha mbola tsy naheno ny ruckus ianao, Google dia nanodina ny fikarohana natao ho azy manokana valiny maharitra.
Midika izany fa miorina amin'ny tantaram-pikarohanao dia tsy hitovy ny valiny. Raha manamarina ny laharan'ny tranonkalanao ianao dia mety ho hitanao fa nihatsara be daholo izy rehetra. Na izany aza, nety ho nihatsara fotsiny ho anao izy ireo fa tsy olon-kafa. Mba hijerena marina ny laharanao dia mila esorinao ny valin'ny fikarohana natokana ho azy.
Misy fomba telo hanakatonana ny fikarohana natao ho anao manokana:
Mba hahazoana antoka fa tapaka vetivety dia miala ianao, meteza ny rindranasa Google rehetra izay tafiditrainao. Ho fepetra fanampiny, alefaso ny Fikarohana manokana ao amin'ny tranonkalanao (Misy izany rehetra izany. Ho an'ny IE, tokony ho eo amin'ny IE8 ianao).
Esory ny cookies rehetra avy amin'i Google. Io dia hamoaka anao any amin'izay tsy itokizan'ny fikarohana. Indray, Browsing tsy miankina amin'ny Safari, Firefox na IE8 dia tokony hanana fiatraikany mitovy. Ao amin'ny Google Chrome, antsoina ilay fiasa Fizarana incognito.
Raha hanaisotra maharitra ny tantaranao dia midira ao amin'ny Tantaran'ny Google Web Search ary alefaso io. Mandehana any amin'ny kaontiko ary kitiho ny Edit eo akaikin'ny My Products ary kitiho Fafao ny tantaran'ny tranonkala maharitra. Rehefa voafafa ny tantaranao dia tsy misy fomba ahafahana manaingo ny valin'ny fikarohana nataonao. Mety mila manao izany matetika ianao.
Raha tena te-hanamora ny tenanao ianao dia tiako ny hivadika ho (ironically) Google Chrome. Azonao atao ny manokatra varavarankely Incognito (ctrl-shift-N) ary tsy hiditra amin'ny tantaram-pikarohanao na hametraka cookies… afaka mijanona miditra ao amin'i Google amin'ny varavarankely iray ianao sy ny fitokisana amin'ny fikandrana vaovao. Izay no fomba nakako ny pikantsary etsy ambony… namboariko ankavia fa tsy namboariko ankavanana tao anaty varavarankely fanamoriana.
Ny tombony azon'ny Google Chrome dia ny Browsing tsy miankina endri-javatra amin'ny mpizaha hafa dia mahatonga ny varavarankely tsy miankina. Tsy afaka manana ny sasany misy ianao ary ny sasany tsy manana. Chrome dia nahavita asa tsara tamin'ny fanaovana an'io ezaka io.
Tadidio fa mbola tsy manome ny tena marina tanteraka io. Ny fitaovanao sy ny toerana misy anao dia mbola hisy akony eo amin'ny valiny. Raha hijery marina ny laharanao dia azonao atao ny mijery Google Search Console ary tena manoro hevitra anao aho hisoratra anarana Semrush.
Tags: manamarina filaharanaincognitofilaharana teny lakilefilaharana teny lakilefikarohana manokanaambonypejy momba ny valin'ny fikarohanalaharana pejy valin'ny motera fikarohanaserplaharana serp
Elefanta sa lolo ianao?
Dec 17, 2009 amin'ny 8: 48 AM
Doug, arahaba soa! Ianao no olona voalohany nanolotra soso-kevitra amin'ny fizahana icognito ankoatry ny obvious miharihary
Dec 17, 2009 ao amin'ny 6: PM PM
Miasa tsara toa ny doka ve ny «incognito»?
(ary maninona aho no tsy afaka mampiasa ny ID teniniko hanomezana hevitra?)
7 Jan 2010 amin'ny 12:27 PM
Iray amin'ireo lahatsoratra tsotra momba ny fomba fandefasana azy io izay niraikitra tao an-tsaiko fotsiny. Ka, androany, rehefa nilaiko ity fampahalalana ity, dia mora ny nanenjika azy sy nampihatra ny fianarana. Misaotra anao fa nampidina Chrome aho ary nampiasa pejy Incognito mba hitsapana ny fikarohana sasany. Misaotra!